टीकटकमा रातभरी लाइभ बसेर दुई दिनमै दुई लाख कमाए पुण्य गौतम – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/टीकटकमा रातभरी लाइभ बसेर दुई दिनमै दुई लाख कमाए पुण्य गौतम
युट्यूवमा छाइरहनुभएकै थियो, एक्कासी कसरी टीकटक लाइभको भुत चढ्यो तपाईंलाई ?
लाइभमा आउनेहरूले धमाधम उपहारहरू फ्याँक्नुहुने रहेछ । मलाई त यस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । गजबै लाग्यो । अनि त म ९ बजेदेखि लाइभ बसेको मान्छे बिहान साढे पाँच बजे मात्रै उठेँ । त्यतिञ्जेलमा मरोमा ३ लाखजति लाइक आएछ ।
महाबीर पुनले स्वाब संकलन गर्ने मेसिन बनाउन थाले नेपालमै
पुनः निषेधाज्ञा : के गर्ने, के नगर्ने ? प्रशासनले फेरि निकाल्यो यस्तो सूचना !